Showing ७१-८० of १५,५४७ items.
कानेपोखरीमा ‘लालकिल्ला’ जोगाउदैँ एमाले, प्यानल नै विजयीको सरुआत
पथरी । नेकपा एमाले लालकिल्ला मानिने मोरङको कानेपोखरी वडा नंं. –७ मा एमालेको प्यानलनै विजयी भएको छ । पूर्व वडा अध्यक्ष समेत रहेका मोहन प्रसाद अधिकारी नेतृत्वको प्यानल विजयी भएको हो । वडा अध्यक्ष अधिकारीले १ हजार ३ सय २८ मत ल्याएर अध्यक्षमा निर्वाचित भएको निर्वाचन अधिकृत कार्यालयले जनाए । अध्यक्षको निकटम प्रतिद्धन्दी नेपाली कांग्रेसका अमृत चेम्जोङले १ हजार ९० मत ल्याएका थिए । त्यसैगरी नेकपा(माओवादी केन्द्र)का नविन राईले ९४, राप्रपाको अध्यक्ष मोहन खड्काले १२, र दाप सहितको खुकुरीको अध्यक्ष पदको सेरमान लिम्बुले ७ मत ल्इाएका थिए । एमालेका विजयी सदस्यहरु पदमकुमारी कार्की १४०९, ज
पथरी। मोरङको कानेपोखरी वडा नंं.–१ मा वडा अध्यक्ष पदमा नेपाली कांग्रेसका रत्नबहादुर कार्की विजयी भएका छन् भने दुई सदस्य पदमा नेकपा(एमाले)बाट विजयी वनेका छन् । अध्यक्ष कार्कीले ११०८ मत ल्याई विजयी बनेका हुन । कार्कीका प्रतिद्धन्दी नेकपा एमालेका तोर्ण बहादुर कार्कीले ८५२ मत ल्याएका थिए । अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रले ४३७ र राप्रपाले ३१ मत ल्याएका थिए । नेपाली कांग्रेसका विजयी उम्मेद्वार विमला बुढाथोकीले ९०४ र दिपेश कुमार थापाले ८७९ मत ल्याएर विजयी बनेका छन् । त्यसैगरी एमालेका दलित सदस्य तुलसा देवी नेपालीले ९०० र रामजी भण्डारीले ९४३ मत ल्याई विजयी बनेका छन् । १ नम्बर वडाबाट गाउँपालिका अध्य
झापा गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा काँङ्ग्रेसको प्यानल नै निर्वाचित
भद्रपुर । झापा गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा वडा अध्यक्षसहित नेपाली काँङ्ग्रेसको प्यानल नै निर्वाचित भएको छ ।नेकपा एमालेका माधव पोखरेललाई १८४ मतान्तरले पराजित गर्दै काँङ्ग्रेसका राजकुमार यादव निर्वाचित भएका हुन् । यादव दोस्रो कार्यकालका लागि वडा अध्यक्ष बनेका हुन् । यादवले ८१७ र पोखरेलले ६३३ मत ल्याएका छन् । त्यस्तै काँङ्ग्रेसबाट खुल्ला सदस्यमा रुपलाल गणेश ७६३, राम लिम्बू ८९२, महिला सदस्यमा अस्मेरु खातुन ८४६ र दलित महिला सदस्यमा हरिमाया विक ६६८ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् ।
पाख्रीबासको १ मा गठवन्धन २ र ३ मा एमाले विजयी
धनकुटा । पाख्रीवास नगरपालिकाको वडा नं.१ मा गठवन्धनका उम्मेदवार भोगेन्द्र पाण्डे सहित प्यानलै विजयी भएका छन । पाण्डेले गठवन्धनको तर्फबाट ४ सय २३ मत ल्याएर विजयी भए भने उनको निकट्तम प्रतिद्धन्दी नेकपा एमालेका दुर्गा वहादुर थापाले २ सय ८६ मत ल्याएका थिए । त्यसैगरी धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिका वडा २ र ३ मा अध्यक्ष सहित एमालेको प्यानलै बिजयी भएका छन् । अन्तिम सार्बजनिक गरिएको मत परिणाम अनुसार वडा नं २ मा वडा अध्यक्षमा एमालेका चुडामणि पुलामीले ७ सय ७० मत ल्याएर विजयी भएका छन भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका धन बहादुर लुंगेली मगरले ५ सय ९६ मत प्राप्त गरेका छन् ।	त्यसैगरि महिला सदस
कोसी १ मा जसपा उम्मेदवार प्यानलसहित निर्वाचित
लौकही । कोसी गाउँपालीका वडा नम्बर १ मा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल प्यानलसहित विजयी भएको छ । कोसी १ मा जसपा नेपालको तर्फबाट वडा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार सोभितनारायण यादव प्यानलसहित निर्वाचित भएका छन् । खसेको जम्मा २३ सय ५० मध्ये ८७५ मत ल्याएर उनी निर्वाचित भएका हुन । उनको निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार निर्मलकुमार मण्डल ७०९ मत ल्याएर दोस्रो भए ।
मोरङका १२ वडा अध्यक्ष सहित ६० जना विजयी
विराटनगर । मोरङमा स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत १२ जना वडा अध्यक्ष सहित ६० जना निर्वाचित भएका छन । विजयी हुनेहरूमा कांग्रेसले सात, एमालेले पाँच र नेकपा माओवादी केन्द्रले एक स्थानमा जित हासिल गरेका छन् । कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नम्बर १ रतनबहादुर कार्की, जहदा गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मा भगवान मरन्डी, ग्रामथान गाउँपालिका वडा नम्बर १ वीरेन्द्र चौधरी, मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर १ मा पर्वत राई, मिक्लाजुङ २ मा बलबहादुर श्रेष्ठ, सुनवर्षी नगरपालिका वडा नम्बर १ मा वीरबहादुर राई र सुनवर्षी नगरपालिका वडा नम्बर २ मा विनोकुमार राजवंशी विजयी भएका छन् । अहिलेसम्म मोरङमा एमालेकाले पाँच जना वडाअध्यक्ष
एक वडाको मतगणनालाई ४० घण्टा १
काठमाडौँ । काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको एउटा वडाको तीन हजार १०० मतगणना गर्न करिब ४० घण्टा लाग्ने भएको छ । वैशाख ३० गते शुक्रबार स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि त्यसै रात २ बजेदेखि नगरको १ नं वडाको मतगणना सुरु भएको थियो । शुक्रबार रातिदेखि गणना सुरु भएको १ नं वडाको मतगणना अझै सकिएको छैन । हालसम्म वडा नं १ को दुई हजार ४२४ मतगणना भएको नगर निर्वाचन अधिकृत शारदा राउतले राससलाई जानकारी दिए । यस वडाको मतगणना सुरु भएको ३२ घण्टा पूरा भइसकेको छ । वडा नं १ मा तीन हजार १०० मत खसेको छ । बाँकी ७०० मतगणना गर्न आज बेलुकीसम्म लाग्ने अधिकृत राउतले सुनाए । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा स्थान अभ
कानेपोखरी १ नं. वडाको अध्यक्ष पदमा काङ्ग्रेस, सदस्यहरुमा एमाले विजयी
पथरी । मोरङको कानेपोखरी वडा नंं.–१ मा वडाअध्यक्ष पदमा नेपाली काङ्ग्रेसका रत्नबहादुर कार्की विजयी भएका छन् भने दुई सदस्य पदमा नेकपा (एमाले) बाट विजयी बनेका छन् । अध्यक्ष कार्कीले ११०८ मत ल्याई विजयी बनेका हुन् । कार्कीका प्रतिद्धन्दी नेकपा एमालेका तोर्ण बहादुर कार्कीले ८५२ मत ल्याएका थिए । अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रले ४३७ र राप्रपाले ३१ मत ल्याएका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसका विजयी उम्मेदवार विमला बुढाथोकीले ९०४ र दिपेश कुमार थापाले ८७९ मत ल्याएर विजयी बनेका छन् । त्यसैगरी एमालेका दलित सदस्य तुलसा देवी नेपालीले ९०० र रामजी भण्डारीले ९४३ मत ल्याई विजयी बनेका छन् । १ नम्बर वडाबाट गाउँपालिका अध्यक्ष पद
धरान । पाककलाका माध्यमबाट विश्वभर चिनिएका नेपालका मास्टरसेफ सन्तोष साहमाथि फिल्म निर्माण गरिने भएको छ । उनको जीवनीलाई आधार बनाएर निर्देशक दीपक रौनियारले फिल्म बनाउने घोषणा गरेका हुन् । साह ‘बीबीसी मास्टरसेफ प्रोफेसनल्स २०२१’ का उपविजेता हुन् । उपविजेतापश्चात् उनी एकाएक सेलिब्रेटी बनेका थिए । उनको बाल्यकालदेखि सेफसम्म आउँदाको दुनियाँबारे फिल्ममा समेटिने भएको हो । हाल फिल्म निर्माणकै लागि रौनियारले उनीसँग संवाद गरिरहेका छन् । केही समयपश्चात् छायाङ्कनमा जान सक्ने निर्देशक रौनियारले बताएका छन् । उनले गरेको जीवन सङ्घर्ष तथा उपलब्धिलाई पनि फिल्ममा समेटिने भएको छ । उनको जीवन अन्यका लागि पनि प्रेरणादा
भोक्राहा नरसिंह १ को वडाध्यक्षमा राप्रपाको प्यानल विजयी
भोक्राहा । भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका-१ मा राप्रपाको प्यानल सहित विजय भएको छ । भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका वडा नं १ को वडा अध्यक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लक्षमण मेहता विजय भएका छन् । उनी सहित प्यानलै निर्वाचित भएका छन् । १ हजार ९० मत ल्याएर मेहता वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएको निर्वाचन अधिकृत मोहन बहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।उक्त वडामा ३ हजार २ सय २८ मतदाता मध्ये २ हजार ४ सय ७८ मत खसेकोमा मेहताका निकटम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका युवराज दाहालले ५ सय ४७ मत ल्याए।सदस्यहरूमा राप्रपाकै , अकुल महतो ७२९, अमजाद मिँया६१५, सरिता उराँव ८२५र दलित महिला सदस्यमा आरति देवी शर्मा ८४६ मत ल्याइ न